PourtoA SP Foundation - Beige | Buy online | SHOP.COM.MM
PourtoA SP Foundation - Beige
Bare Skin ကဲ့သို့ပေါ့ပါးစွာခံစားရခြင်း
အပူတအားပြင်းတဲ့ ဒီလိုရာသီအတွက် UV ကာကွယ်ပေးနိုင်တဲ့ ဖောင်ဒေးရှင်းကောင်းကောင်းတစ်ခုတော့ လိုပါတယ်။ PourtoA က ကျွန်မရဲ့လိုအပ်ချက်တွေအားလုံးကို ဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်တယ်။ အမြဲသုံးဖြစ်ပါတယ်။ Read more Hide
ခုတလော အယ်နီညိုကြောင့် ရာသီဥတုတွေပူနေတဲ့ချိန်မှာ ဒီ PourtoA SP Foundation က မျက်နှာအတွက်အသင့်တော်ဆုံးပဲ။ ခရမ်းလွန်ရောင်ခြည်ကာကွယ်ပေးလို့ နေပူထဲမှာ စိတ်ချသွားနိုင်တယ်။ အမဲစက်တွေလည်း ပျောက်သွားပြီခု။ Read more Hide
covers red marks
This PourtoA isagreat foundation! It covers red marks and doesn't get too powdery if you add much. Read more Hide
SP Foundation - Beige
Specifications of SP Foundation - Beige